IChina eya eFrance-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>Inkomba Yezinsizakalo>Izilwandle zaseMedithera naseziLwandle eziMnyama zaseYurophu>China eya eFrance
Kuthunyelwa kusuka eChina kuya eFrance
Ngisho nezinsizakalo zokuthumela zisuka eChina ziye eFrance zivuthwe kakhulu kulezi zinsuku, abakwa-SHL bangahlala bezama ukwenza umsebenzi wokusebenza kahle kangcono, ngaphandle kwesixazululo esihle kakhulu kanye nensizakalo enhle, singanikeza namanani wokuncintisana asuka eChina aye eFrance.
I-SHL izosiza ukukhetha kwakho indlela ehamba phambili yokuthumela, izindleko zokuthumela ezincintisanayo nezinkampani ezihamba phambili zokuthumela ukusiza ukuhambisa kwakho kusuka eChina kuye eFrance.
I-China Railway Express isuka eChina iya eFrance
Ukuhanjiswa Kwempahla Yomoya kusuka eChina kuya eFrance
Kunezikhumulo zezindiza eziningi eziyisisekelo ezenziwa eFrance futhi kunezimpahla eziningi zokuthumela ezivela eChina ziya eFrance ngendiza, i-SHL inganikeza umthwalo wokuncintisana womoya ophansi kakhulu kunemakethe kwikhasimende lethu ngokusekelwe ohlelweni lwakho lokufuna.
Ukuhamba ngeRo-Ro / Break Bulk kusuka eChina kuya eFrance
I-SHL inganikeza i-RORO ROROMAFI BREAKBULK ngemishini enembile, izimoto nemishini esindayo kusuka eChina kuya eFrance Singanikeza izixazululo zokuma kanye nezinkinga ezihambelana nazo.
Ukuthunyelwa Kwasolwandle Olwandle kusuka eChina kuya eFrance
I-SHL inenqwaba yokuqina kwezimpahla zokuthumela isuka eChina iye eFelixstowe, eSouthampton, njll. Ukuze njalo sikwazi ukuthola umthwalo olwandle oluhle oluya ethekwini laseFrance kusuka kubantu abathwali abaningi, futhi futhi singakwazi ukuqiniseka ukuthi indawo yesitsha ingakanani ngenkathi yesikhathi esiphakeme.
Door to Door Service China ukuya eFrance
Ngokusebenzela umnyango nomuzi, abakwa-SHL bangenza imvume yamasiko ngokushesha eFrance futhi balethe izimpahla zokuthumela egumbini lokugcina lekhasimende lethu, Ngaphandle kwalokhu, uma ungumuntu siqu, abakwa-SHL banenkampani yezohwebo abangaba ngummeli we-BL futhi bakusize ungenise ukuthunyelwa izimpahla ngempumelelo.
I-China ibanga elingamakhilomitha angama-7,775 ukusuka eFrance kodwa ukudabula leli banga kungathatha isikhathi eside ngenxa yemizila yolwandle echazwe yimizimba yamanzi.
Ngaphambi kokukhetha le ndlela yokuthumela, kufanele azi kahle amachweba ahlukene eChina naseFrance.
Izikhumulo Sezindiza Eziyinhloko eFrance
Isikhumulo sezindiza i-Perpignan-Rivesaltes Isikhumulo sezindiza saseStrasbourg International
Isikhumulo sezindiza i-Felix Eboue Isikhumulo sezindiza iToulouse Blagnac
Isikhumulo sezindiza saseMontpellier-Meditia I-Aeroport Roland Garros
Isikhumulo sezindiza i-Dzaoudzi-Pamandzi International Isikhumulo sezindiza i-Figari South Corsica
Isikhumulo sezindiza i-Le Havre Octeville Isikhumulo sezindiza i-Pau Pyrenees
Isikhumulo sezindiza iBrest Bretagne I-EuroAirport
I-Caen - Isikhumulo sezindiza i-Carpiquet Isikhumulo sezindiza i-La Tontouta International
Bastia - Isikhumulo sezindiza sasePoretta Isikhumulo sezindiza i-Lille
Isikhumulo sezindiza i-Nantes Atlantique Isikhumulo sezindiza saseParis Orly
Isikhumulo sezindiza saseKalons Vatry Faa'a International Airport
Isikhumulo sezindiza iRennes-Saint-Jacques Bordeaux - Isikhumulo sezindiza iMerignac
Isikhumulo sezindiza saseMartinique Aime Cesaire International Isikhumulo sezindiza iTarbes-Lourdes-Pyrenees
Isikhumulo sezindiza Isikhumulo sezindiza saseParis Charles de Gaulle
Isikhumulo sezindiza iGrenoble-Isere Isikhumulo sezindiza saseMarseille Provence
Isikhumulo sezindiza i-Clermont-Ferrand Auvergne Isikhumulo sezindiza saseLyon-Saint Exupery
Izinhlobo Zokuthumela kusuka China kuya eFrance
Yiliphi itheku okufanele ngilisebenzise ukuhambisa ngomkhumbi lisuka eChina liye eFrance?
Ngoba udinga imbobo engakuxhumanisa ngqo neFrance
Yisiphi isikhathi esiphelele esithathwa ngomkhumbi sisuka eChina siye eFrance?
Ngamafuphi, ungazicijisa kuzo zonke lezi ukuthola sonke isikhathi esizothatha umkhumbi usuka eChina uye eFrance
Abahambisi bezimpahla abanjalo bayayazi imithetho nemigomo elawula ukungenisa ezweni kusuka China kuya eFrance